သက်ဝေ: နှစ်ကျပ်ခွဲ ဇာတ်လမ်း
P.Ti December 22, 2009 at 1:47 PM
ဟားဟား ဟုတ်ပါ့... နှစ်ကျပ်ခွဲကြီးရအောင် တောင်းပါ။ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ စိတ်အပန်းတွေပါ ပြေစေလို့၊ ပိုက်ဆံကုန်ပေမယ့် ကုန်ရကြိုးနပ်အောင် ချစ်သူကို သေချာသိအောင် ပြောပါလေ...
လူမှန်ရင် နှစ်ကျပ်ခွဲတော့ရှိတယ်.. ဆိုတာ ရီသွားတယ် အမ :D ဟိဟိ...
SDL December 22, 2009 at 2:34 PM
ကိုလူထွေး December 22, 2009 at 2:55 PM
လူတယောက်ကို မုန်းရင် သူ့ကို ကင်မရာတလုံး လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါလို့ ဆိုကြတယ်လေ...
သူရှိနေရင် (အရင်ခေတ်ကတော့ ဖလင်ဖိုးနဲ့ ကူးခနဲ့) ကုန်ပေါက်ကြီးပဲကိုး...
နှစ်ကျပ်ခွဲမရတာ ကိုယ့်ကို ဝိုင်းချစ်နေကြလို့ မှတ်လိုက်ပေါ့ဗျာ...
ချစ်ကြည်အေး December 22, 2009 at 3:48 PM
hmwe December 22, 2009 at 3:50 PM
သူများတွေဆို ၂ ကျပ်ခွဲ မက သုံးကျပ်လေးကျပ် ရှိကြောင်း
I Phone တွေ ဘာတွေ တောင် ပြကြသေးတာ
ပြီးရင် ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့် ရတာပေါ့
အဟိ.. wiiရလို့ ဒီနှစ်ကျပ်ခွဲရောဂါငြိမ်နေတယ်သိလား။
ကုံတိုင်းရွာက မကြုံကြွား mm
Thant December 22, 2009 at 5:11 PM
ဟားဟား..အစ်မက ကလေးပေါက်စလိုပါဘဲလား...။ အဲဒီ ၂ကျပ်ခွဲကြီးနဲ့အစ်မရိုက်တဲ့ Orchard X'mas ပုံတွေကြည့်ချင်လိုက်တာ...
(အဆင်းကို ဝိုင်းတွန်းပေးလိုက်ပြီ ) :D
Ko Paw December 22, 2009 at 5:28 PM
လူမှန်ရင် နှစ်ကျပ်ခွဲတော့ရှိကြတာပဲ ဆိုပေမယ့် နှစ်ပိဿာခွဲလောက် လေးတဲ့အရာကြီးကို သွားလေရာ လည်ပင်းမှာ ဆွဲသွားရမယ့် ဒုက္ခကိုလည်း ထည့်တွက်ဖို့လိုသေးတယ်နော်။း-)
Welcome December 22, 2009 at 5:39 PM
အဲလို ကင်မရာမျိုး ရှိသင့်တာကြာပေါ့။ အစ်ကို ၀ယ်မပေးဘူး ဆိုရင် အစ်ကို့ဘက်က ပေ့ါသွားတာလို့ သံသယ ၀င်ချင်တယ်။ မရမချင်း အနားကပ်ပြီး တတွက်တွက်နဲ့သာ ပူဆာပေရော့ ....
Rita December 22, 2009 at 8:55 PM
ဟားဟား ကိုပေါ ပြောသလိုပဲ တွေးနေမိတာ။
ကျွန်မကတော့ ငပျင်း မို့လား မသိ။
သွားလေရာ ဒါကြီး သယ်ရမှာ ဒုက္ခများလှပါတယ် တွေးမိတယ်။
ဖုန်းတောင် မသယ်ချင်တော့ဘူး။ မြန်မာပြည်လို ရှိုးပြလို့ ကောင်းတဲ့ အရာ မဟုတ်တော့။
အပြုံးပန်း December 22, 2009 at 9:22 PM
ကင်မရာ = ပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံးစာ
T T Sweet December 22, 2009 at 10:25 PM
အော် ... သူက၂ကျပ်ခွဲဆိုတော့ ကိုယ့်ထက် ၂ကျပ်ပြား၃၀ကြီးများတောင် များသွားပြီဆိုပြီး ကမန်းကတန်းဖတ်လိုက်တာ ကင်မလာအကြောင်းဖြစ်မေပါရောလား ... ရအောင်ဝယ်ခိုင်းဗျို့ ... အဲဒါမျိုးကမှ ရိုက်ရတာ ဖီလင်လာတာ ... ဟိဟိ ... အဆင်းဘီးတပ်ပေးလိုက်ပြီ။...
ကျနော့်ကိုလည်း ၂ကျပ်ခွဲတန်နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးပါ။။
Craton December 23, 2009 at 12:33 AM
သြော်.. နှစ်ကျပ်ခွဲ.. နှစ်ကျပ်ခွဲ.. မှတ်သားသွားတယ် တီတီသက်ဝေး)))
Hmoo December 23, 2009 at 4:07 AM
Ibtry2diet4model :)
Hmoo December 23, 2009 at 4:43 AM
Photographer & ..... :P
puluque December 23, 2009 at 9:27 AM
နှစ်ကျပ်ခွဲတန် ကြီး မြန်မြန်ရပါစေဗျာ...။ ဟိုလူကလဲ နှစ်ကျပ်ခွဲ ဒီလူကလဲ နှစ်ကျပ်ခွဲနဲ့ ပုလုတောင် ဝယ်ရင်ကောင်းမလားလို့...ဒါပေမဲ့ ဓါတ်ပုံသေသေချာချာ ရိုက်တက်ဘူးဗျ...
တန်ခူး December 23, 2009 at 10:49 AM
ရှုးးးးးးးးး………. ကိုကြီးကို ဒီကော်မန့် သွားမပြနဲ့ နော်…
အချင်းချင်းမိုလို့ ပြောတာပါ သက်ဝေရယ်… တို့ မှာလေ… ၂ကျပ်ခွဲမပြောနဲ့၁ကျပ်ခွဲတောင် မရှိပါဘူး…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုကြီးမေးရင် ရောချပေးမယ်နော်… သက်ဝေမှာ ၂ကျပ်ခွဲကြီးရှိတော့ တို့ လဲ ကပ်ရိုက်လို့ ရတာပေါ့….
ကိုကျောက် December 23, 2009 at 11:38 AM
အင်း...ကိုယ်လဲ နှစ်ကျပ်ခွဲ ရအောင်တော့စုမှ...
မီးမီးချစ် December 23, 2009 at 8:53 PM
ကိုကိုချစ် ကလဲ ၂ကျပ်ခွဲ လိုချင်လို့ တပူပူ တကျီကျီ ဖြစ်နေတာ..
မီးချစ်ကတော့ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုပဲ ပိုလိုချင်နေတာလေ..း))
ရွှန်းမီ December 24, 2009 at 3:12 AM
ကြည် December 24, 2009 at 12:48 PM
မိသားစုဝင်အားလုံးရဲ့ အချစ်ကို သိမ်းပိုက်နိုင်သူမို့ တောင်ပုံတွေ၊ တိမ်ပုံတွေ၊ ကမ်းစပ်က ရေလှိုင်းပုံတွေ၊ ရှုမျှော်ခင်းပုံတွေ ဝေဝေဆာဆာ တွေ့ကိုတွေ့ရမှာသေချာပြီးသား.... အဲဒီအချိန်ဆိုရင် ဘလောဂ့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ပုံတွေလည်း ဝေေ၀ဆာဆာတင်ပါအုံးလို့နော်...
သင်းနွယ်ဇင် December 24, 2009 at 8:30 PM
ရအောင်ပူဆာ.. ရရင် နည်းလေးမျှဖို့မမေ့နဲ့း)
ဟင်... သက်ဝေညီမရေ... ကင်မရာအကြီးက ကောင်းတော့ ကောင်းပါရဲ့ သယ်ရပြုရတာ စတိုင်မကျဘူးဟ။ အဲဒီကျ ကိုကြီးကိုပဲ ကိုင်ခိုင်းမှဖြစ်မယ်.. အမတော့ ဗွီဒီယိုကင်မရာကြီး ကိုင်ရလွန်းလို့ ဘာဆိုဘာမှကို မကိုင်ချင်တော့ပါ.. ဒါပေမယ့် သက်ဝေ ၂ ကျပ်ခွဲ ရသွားရင်တော့ဖြင့် ဓါတ်ပုံအရိုက်လာခံပါဦးမယ်...
(ဒီနေ့မှ နည်းနည်းအားလို့ ဘလော့လည်ဖတ်နေတာ)
ရွှေပြည်သူ December 25, 2009 at 5:10 PM
အစ်မသက်ဝေရေ... ဝယ်ဖို့ ထောက်ခံမဲပေးပါတယ်း) နေရာတိုင်း သယ်သွားဖို့ ခက်ပေမယ့် ဝါသနာပါရင် မရိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာတောင် သူ့ကို ကြည့်နေမြင်နေရတာနဲ့တင် ကျေနပ်စရာ ကောင်းနေရော...း))
သက်ဝေ December 25, 2009 at 11:11 PM
ချစ်သူက ကျောပူတာသာ ခံနိုင်မယ်.. နားပူတော့ မခံနိုင်ဘူး ဆိုပြီးတော့ကာ... ဆိုပြီးတော့ကာ...း))
လောလောဆယ်မှာ အရမ်း အရမ်းကို လိုချင်နေတော့လဲ နှစ်ပိဿာခွဲ လောက်လေးတာတွေ၊ သယ်ရ ယူရ စတိုင်မကျတာတွေ၊ လည်ပင်းကျိုးမလို ဖြစ်မှာတွေ၊ နောက်ဆက်တွဲ ဝယ်စရာတွေနဲ့ ကုန်ပြီးရင်း ကုန် ဖြစ်နေမှာတွေ... ဘာညာ ဘာညာတွေ ဘာမှမတွေးနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်...
တအိမ်လုံးကတော့ ဟိုအကောင်လက်ထဲ ဟိုအသီး ရနေသလိုပဲ လို့ တမျိုး၊ ဘာဆို ဘာမှကို မစားနိုင်တော့အောင် ဗိုက်ဝနေပြီလို့ တသွယ် တခဲနက် အားပေး ဂုဏ်ပြုနေကြပါတယ်...။
နှစ်ကျပ်ခွဲပိုစ့်ကို လာဖတ်ကြပြီး ချစ်စဖွယ် မှတ်ချက်များ ရေးသွားကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
အခါ အခွင့်သင့်ရင်ဖြင့် သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို အဲဒီ နှစ်ကျပ်ခွဲကြီးနဲ့ ဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေ ရိုက်ပေးချင်ပါတယ်...။
လှလှလေး ရိုက်ပေးနော် လို့ ပြောလိုက်ရင် တချို့ဓါတ်ပုံဆရာတွေ ပြန်ပြောတတ်ကြသလို နဂိုရှိမှ နဂိုင်းထွက်မှာပေါ့တို့...
လူလှမှ ဓါတ်ပုံက လှမှာပေါ့ တို့... စတဲ့ ဘာညာ ဘာညာတွေ ပြန်မပြောပါဘူး...
ပုံ ၂၀၀ လောက်ရိုက်လိုက်ရင် အနည်းဆုံး နှစ်ပုံ သုံးပုံတော့ အကောင်းကျန်မှာပါလို့ ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ်...း))
khin oo may December 26, 2009 at 10:37 PM
ဝမ်းသာမိပါကြောင်း. ပုံ .....၉၅ပြား လာဖတ်သွားသည်။
Taungoo December 26, 2009 at 11:00 PM
Steve Evergreen December 27, 2009 at 6:22 PM
သက်ဝေ December 28, 2009 at 12:49 PM
မမ ခင်ဦးမေ... ကျေးဇူး...
၉၅ ပြားဆိုတော့ ဘယ်လိုနားလည်ရမှန်းမသိ ဖြစ်သွားတယ် ရှင်းပါအုံးလေ... နော်...
ကိုတောင်ငူ... အားပေးကြတာပါ...း))
Steve... Thanks for visiting..!!
tin min htet December 28, 2009 at 6:30 PM
ဓာတ်ပုံရိုက် ဝါသနာပါတယ် ဆိုရင်တော့ ဝယ်သာဝယ်။ အဲဒါကြီးနဲ့ အော်တို ဖိုးကပ်ချည်းရိုက်ရင်တော့ သိပ်မတန်လှဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ဝယ်ထားတဲ့ တမတ်တန် ကင်မရာလေးနဲ့ အဆင်ပြေနေတာပဲ။
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ December 29, 2009 at 1:32 PM
တစ်ကျပ်မှာ ပြားတစ်ရာ ရှိပါတယ်
MELODYMAUNG January 3, 2010 at 4:57 PM
haha me too... one of them.. :P
သီဟသစ် January 14, 2010 at 12:58 AM
၂ကျပ်ခွဲကို သဘောကျသွားလို့ အုန်းသီးလေး ၀ယ်ထားတဲ့အကြောင်း စာရေးဖြစ်သွားတယ်
ဏီ(န်)ကင်း January 14, 2010 at 9:27 AM
MrDBA January 14, 2010 at 2:32 PM
အမြန်ရပါစေဗျား။ လည်ပင်းမှာဆွဲရင် လည်ပင်းလေးတယ်။ လက်ကကိုင်တော့ ကြာရင် လက်ညောင်းတယ်။ သုံးချောင်းထောက်ပါရင် ခရီးမတွင်ဘူး။ ဒွတ်ခတွေတော့ များသားခင်ဗျ။ အားပေးပါတယ်ဗျို့
TNT January 18, 2010 at 10:32 AM
:) တန်ပါတယ် အစ်မရေ။ အကောင်းဆုံးအချိန်တွေကို ရပ်တန့်စေနိုင်တာ ဒီအရာပဲရှိတာကိုး။
သိသွားပြီ... မိန်းမတွေ အကြောင်း...။ ဒါမျိုးတွေ့ရင် နောက်..နောင် သတိထားရမယ်.. :)